Tallaalada COVID-19: horumarinta, ansixinta iyo badqabka | COVID-19 vaccines: development, approval and safety | Unite against COVID-19
Tallaalada COVID-19: horumarinta, ansixinta iyo badqabka | COVID-19 vaccines: development, approval and safety
Sida tallaalada COVID-19 loogu sameeyay si dhaqsi ah oo badqab ah
Abid maysan dhicin heerkan iskaashiga caalamka ah ee saynisyahanada iyo dowladaha ee hormarinta tallaalka. Tani waxay sare u qaaday xawaaraha hormarinta tallaalka, tijaabooyinka caafimaadka, iyo ansixinada daafaha caalamka.
Tallaalada waxaa loo sameeyay si degdeg ah laakiin iyada oo aan la qaadin wax wado gaaban ah ee nidaamyada muhiimka ah ama halis gelinayo badqabka.
Cilmi baarayaasha ayaa u suurtogashay inay isticmaalaan aqoontooda fayrasyada kale ee korona iyo sameynta tallaalka si ay u siiso bilow hore.
Tijaabooyinka caafimaadka ayaa sidoo kale u suurtogashay inay howlgeliyaan tirooyin badan ee mutadawaciin ah ee ka dheereeya sida caadiga ah sababtoo ah danaha caalamka iyo walaaca
COVID-19. Qaar ka mid ah tijaabooyinka caafimaadka ayaa la sameyn karay isla waqtiga badelkii mid ba midka kale kadib. Tani waxaa loola jeedaa saynisyahanada ayaa durbadiiba go’aansan karay haddii tallaalka uu wax ku ool ahaa muddo waqti gaaban – sida waafaqsan xaaladaha caadiga ah tani waxay qaadan kartaa bilooyin badan ama xitaa sannooyin.
Dhiraha wax soo saarka balaaran ayaa la hormariyay, marka tallaalada waxaa loo soo saari karaa si dhaqsi ah iyo baaxad ka badan mida horaan suurtogal u aheyd.
Qiimeynta tallaalka iyo ku ansixinta New Zealand
Medsafe waa maamulka badqadka daawooyinka New Zealand. Waxay qiimeysaa adeegsiyada dhammaan daawooyinka cusub, oo ay ku jiraan tallaalada, si loo hubiyo inay buuxiyaan heerarka caalamiga ah iyo sharuudaha deegaanka.
Medsafe waxaa kaliya oo ay siisaa ogolaansho loogu isticmaalayo tallaalka Aotearoa, markii ay ku qancaan waxay buuxisay heerar toos ah oo badqabka, waxtarka iyo tayada. Tani waa isku nidaamka loo isticmaalo in lagu qiimeeyo daawooyinka kale, sida tallaalka samboorka.
Maysan jirin wado gaaban ee loo qaaday ansixin siinta.
Tallaalka Pfizer ayaa si guul ah ay u isticmaaleen mallaayiin caalamka oo dhan. Waxay sii joogteysay si looga warhayo badqabka awgeed.
Sida tijaabooyinka tallaalka Pfizer u shaqeeyo
Tijaabooyinka caafimaadka ayaa ogaaday in tallaalka wax ku ool u leeyahay da’aha oo dhan, sinjiga, jinsiga, qowmiyada iyo dadka qabo xaaladaha caafimaadka la xiriiro.
Daraasado ayaa muujinaya in qiyaastii boqolkiiba 95% dadka qaatay labada garoojo ee tallaalka, ay ka illaalsanyihiin inuu ku dhaco aastaamaha COVID-19. Taasi waxay la micna tahay markii aad si buuxdo u tallaalantahay waxaad si dheer ugu dhowdahay inaad si dhab ah u jiratid.
Tijaabooyinka caafimaadka oo dhan, tallaalka Pfizer waxaa lagu daraasadeeyay qiyaastii 44,000 ka qeybqaatayaal. Bar ka mid ah dadkan ayaa qaatay tallaalka iyo bar waxay qaateen saliinka afka. Ka qeybqaatayaasha ayaa ahaa qowmiyado ku kala duwan, da’aha, sinjiga iyo xaaladaha caafimaadka qarsoon.
Tallaalka Pfizer ayaa maray 3 wajiyo baaritaan ah:
Wajiga 1 iyo 2 wuxuu qiimeeyay badqabka iyo difaaca (jawaabta difaaca garoojo walba ka dib) ee heerarka garoojo kala duwan ee tallaalka oo dad yar.
Wajiga 2 iyo 3 wuxuu qiimeeyay badqabka iyo waxtarka tallaalka lagula dagaalamayo COVID-19 aastaamaha leh 2 garoojo kadib ee heerka la doortay, iyada oo la siinayo 21 maalmood u dhaxeyso, dadweynaha badan.
Si loo fahmo waxtarka muddada dheer iyo badqabka tallaalka, ka qeybqaatayaasha ku jiro tijaabooyinka caafimaadka ayaa la raad raacayaaa 2 sanno kadid garoojada labaad ee tallaalka Pfizer.